“Inona moa no Takin’i Jehovah Aminao?” | Manatòna An’Andriamanitra
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Groenlandey Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Nzema Ossète Ourdou Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
“Inona moa no Takin’i Jehovah Aminao?”
INONA no takin’i Jehovah amin’izay te hanompo azy sy te hahazo sitraka aminy? Mitaky ny lafatra ve izy ka tsy ho vitantsika olombelona tsy lavorary mihitsy ny hampifaly azy? Sa izay fara vitantsika ihany no takiny? Tena ilaina fantarina ny valin’ireo raha te ho falifaly isika rehefa manompo an’Andriamanitra. Handinika ny tenin’i Mika mpaminany isika mba hahalalana izay takin’Andriamanitra.—Vakio ny Mika 6:8.
“Efa nolazainy taminao izay tsara.” Tsy mila maminavina izay takin’Andriamanitra amintsika isika. Lazainy mazava ao amin’ny Baiboly izany. Zavatra “tsara” no takiny amintsika fa tsy ratsy. “Andriamanitra dia fitiavana” ka izay hahasoa antsika foana no tadiaviny. (1 Jaona 4:8; 5:3) Sady mampifaly azy isika rehefa manao izay takiny no mandray soa.—Deoteronomia 10:12, 13.
“Inona moa no takin’i Jehovah aminao?” Manan-jo hitaky zavatra amintsika Andriamanitra, satria izy no Loharanon’aina sy mahatonga antsika ho velona. (Salamo 36:9) Tokony hankatò azy àry isika. Fa inona tokoa no takiny amintsika? Mamintina izany ny zavatra telo nolazain’i Mika. Mahakasika ny fifandraisantsika amin’ny hafa ny roa voalohany, ary momba ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra ilay farany.
“Hanao ny rariny.” Milaza ny boky iray fa ny teny hebreo nadika hoe “manao ny rariny”, dia midika koa hoe “manao ny marina sy mahitsy amin’ny mpiara-monina.” Tian’Andriamanitra ho araka izay marina sy mahitsy aminy ny fomba hitondrantsika ny hafa. Manao ny rariny isika raha manao ny marina sy tsy manavakavaka. (Levitikosy 19:15; Isaia 1:17; Hebreo 13:18) Raha manao ny rariny amin’ny hafa isika, dia hanao toy izany amintsika koa izy ireo.—Matio 7:12.
“Ho tia hatsaram-panahy.” Tsy ny haneho hatsaram-panahy fotsiny no tian’i Jehovah hataontsika fa ny ho tia azy io koa. Azo adika koa hoe “hatsaram-panahy feno fitiavana” na “fitiavana tsy miovaova” ilay teny hebreo nadika hoe “hatsaram-panahy” (hesed). Hoy ny manam-pahaizana iray: “Tsy mahalaza ny hevitry ny [hesed] raha hoe fitiavana na famindram-po na hatsaram-panahy fotsiny, fa izy ireo mitambatra mihitsy.” Raha tia hatsaram-panahy àry isika, dia ho vonona hampiseho izany ka ho finaritra erỳ manampy ny sahirana. Ho sambatra isika satria tia manome.—Asan’ny Apostoly 20:35.
“Hanetry tena rehefa miara-mandeha amin’Andriamanitrao.” Midika hoe “manaraka fomba fiaina iray voafaritra tsara” ny hoe “mandeha” ao amin’ny Baiboly. Miara-mandeha amin’Andriamanitra àry isika rehefa manaraka ny fomba fiaina atoron’ny Baiboly. Ahoana kosa ilay hoe ‘manetry tena’ rehefa manao izany? Mila miaiky isika hoe mpanota ka tsy mahavita tena fa mila miantehitra aminy. Miaiky koa isika fa voafetra ihany ny mety ho vitantsika, ary tsy mitaky zavatra tsy ho vitantsika Andriamanitra.
Soa ihany fa tsy mitaky izay tsy ho vitantsika i Jehovah. Faly izy rehefa manompo azy araka izay fara herintsika isika. (Kolosianina 3:23) Fantany hoe hatraiza ny fara vitantsika. (Salamo 103:14) Raha manetry tena isika ka miezaka manaiky an’izany koa, dia ho faly rehefa miara-mandeha aminy. Fantaro àry izay tokony hatao mba hiarahana mandeha amin’Andriamanitra, dia hotahiny tokoa ianao.—Ohabolana 10:22.
Famakiana Baiboly Amin’ny Novambra:
Joela 1-Mika 7
Hizara Hizara “Inona moa no Takin’i Jehovah Aminao?”
w12 1/11 p. 22